MSS 9: စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်စာရင်းများ - Zomi Adventist Innkuan
နိုဝင်ဘာ ၂၃ – ၂၉
ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း နိုဝင်ဘာ ၂၃
ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ဧဇရ ၁း၉-၁၁။ ဒံ ၁း၁၊၂။ ဒံ ၅။ တရားဟော ၃ဝး၁-၆။ ဧဇရ ၈း၁-၂၃။ နေဟမိ ၁၁း၁၊၂။ ၁၂း၁-၂၆။
“ညီအစ်ကိုမှူးမတ်တို့၌မှီဝဲလျက်၊ ဘုရားသခင်၏ကျွန်မောရှေ အားဖြင့်ထားတော်မူသော ဘုရားသခင်၏တရားတော်အတိုင်းကျင့်ပါ မည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ငါတို့အရှင်ထာ၀ရဘုရား၏ပညတ်တော်များ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါမည်” (နေဟမိ ၁ဝး၂၉)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ သားစဉ်မြေးဆက်ဆင်းသက်သည့် နာမည်စာရင်းကို ကျော်ဖြတ်သွားတတ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်မှ ထိုသို့ နှုတ်ကပတ်တော်အတွင်းထည့်သွင်းထားခြင်းမှာ အကြောင်းရင်းရှိ၏။ သမ္မာ ကျမ်းစာမှဖော်ပြသော ထာ၀ရဘုရားသည် အသေးစိတ်တိကျသောဘုရား ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သည့်ကိစ္စအထိ မှတ်သားသတိပြုသောဘုရားဖြစ်သော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်သောအခါမျှ မေ့လျော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကို အာမခံထားပါသည်။
အနည်းငယ်မျှသာဖော်ပြထားသော ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်စာရင်းကို ကြည့်လျှင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုအကြောင်းကိုသော်လည်း ကောင်း၊ အရေးမပါသောအသေးအဖွဲ့ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း ဂရုပြုတော် မူကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရသည်။ ယေရှုရှင်မိန့်တော်မူချက်၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်ယံ၌ပျံသန်းသော စာကလေးတစ်ကောင်ကိုပင် ဂရုစိုက်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ဆံပင်ချည်တစ်ပင်တိုင်းကိုလည်း ရေတွက်တော် မူ၏။ “စာငှက်ငါးကောင်ကို အသရိနှစ်ပြားအဖိုးနှင့်ဝယ်ရသည်မဟုတ်လော။ ထိုစာငှက်တစ်ကောင်ကိုမျှ ဘုရားရှင်မေ့လျော့တော်မမူ။ သင်တို့ဆံပင်သည် လည်း အကုန်အစဉ်ရေတွက်လျက်ရှိ၏။ ထိုကြောင့် မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့သည် စာငှက်အများတို့ထက်သာ၍မြတ်ကြ၏” (လုကာ ၁၂း၆၊၇)။ ထိုမျှလောက်အသေးစိတ်ကို ဂရုထားတော်မူသောဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ် တို့ကိုလည်းဂရုထားတော်မူကြောင်းကို ယုံကြည်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ခံရသော ဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာအသေးစိတ်ကိုလည်း ဘုရားရှင်သိတော်မူသည်။
သို့ဖြစ်လျှင် စိတ်ချယုံကြည်စွာ၊ ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားယုံကြည်ရန်လို သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာတစ်ခုလုံးကို ဘုရားရှင်ဘက်စုံထောင့်စုံမှ ကြည့်ရှု တော်မူကြောင်းကို သေချာစွာစိတ်ချနိုင်ရမည်။ ထိုသို့သိရှိရ၍ စိတ်ကျေနပ် ခြင်းဖြစ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘက်စုံထောင့်စုံမှအကြောင်းအရာ များကို ဂရုစိုက်ရန်လိုကြောင်းကို သွန်သင်ထားပါသည်။
တနင်္ဂနွေ နိုဝင်ဘာ ၂၄
ဧဇရ ၁း၉-၁၁ နှင့် ဒံ ၁း၁၊၂ ကိုဖတ်ပါ။ ဧဇရအသုံးပြုရည်ညွှန်း သောစကားကိုနားလည်ရန် ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်းမှ ကျမ်းချက်များက မည်သို့ကူညီရှင်းလင်းထားသနည်း။
မှတ်သားရန်မှာ ဧဇရသည် အသေးစိတ်ပေးထားခြင်းခံရသော အကြောင်းအရာကို ဒံယေလ၌ရုပ်ပုံလွှာကြီးတစ်ခုအဖြစ် တင်ဆက်ထားသည်။ တစ်ပြိုင်တည်း နှစ်ဦးလုံး၏မှတ်ချက်ပြုသည့်အချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းဖြစ်သည်။
“တိုင်းနိုင်ငံတို့၏ရာဇဝင်သမိုင်းများသည် ယနေ့အချိန်အခါ၌ ကျွန်ုပ် တို့ကိုစကားပြောနေသည်။ တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဖြစ်စေ၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီ ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်သည် အကြံအစည်တော်ထားရှိပေးပြီးသားဖြစ်သည်။
ယနေ့အချိန်အခါသည် လူသားများနှင့်တိုင်းနိုင်ငံများကို ဘုရားသခင်စမ်းသပ် သောအချိန်ဖြစ်သည်။ မိမိရွေးချယ်မှုအပေါ် မိမိ၏လမ်းဆုံးရောက်ရှိသွားလိမ့် မည်။ ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးကိုပြည့်စုံစေရန် ဘုရားသခင်သည် အုပ်စိုးမှုပြု နေပါသည်။” Ellen G White, Prophets and Kings, p. 536.
ဒံ၊ ၅ ကိုဖတ်ပါ။ ဗေလရှာဇာမင်းကြီးအပေါ်ကျရောက်သော တရား စီရင်ခြင်းအကြောင်းကို ဤကျမ်းချက်က မည်သို့သွန်သင်ထားသနည်း။
ဗာဗုလုန်နိုင်ငံသည် ဘီစီ ၅၃၉၊ အောက်တိုဘာလ၌ မီဒိုပါရှန်ဘုရင် ကုရုမင်း၏စစ်တပ်မှ ချေမှုန်းကျရှုံးသွားစေသည်။ ဗေလရှာဇာသည် မိမိ၏ အောင်မြင်မှုကို အလွဲသုံးခဲ့သည်။ စည်းစိမ်ယစ်မူးသည်၊ ကျော်ကြားချင်သည်။
ရိုင်းစိုင်းစွာဖြင့် စားပွဲသောက်ပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်သောညမှာပင် အသတ်ခံရပြီး၊ ဗာဗုလုန်အင်ပါယာလည်း အဆုံးသတ်သွားရသည်။ နန်းတော်၏နံရံထက်၌ ဘုရားရှင်မှစာတစ်ကြောင်းရေးသားပေးလိုက်သည်။ ရေးသားချက်မှာ မင်းကြီး ၏နေ့ရက်ကိုရေတွက်ရာ အဆုံးသတ်သောအချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ နေဗုခဒ်နေဇာမင်း၏သင်ခန်းစာယူဖွယ်အကြောင်းများကို သူကြားသိခဲ့ရသည့် တိုင်၊ ထိုသင်ခန်းစာကိုမသင်ယူခဲ့။ ဘုရားသခင်၏သတိပေးခြင်းနှင့်သွန်သင်ချက် ကိုမလိုက်နာတိုင်း အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောဆုံးရှုံးမှုကိုသာ ရရှိခံစား သွားရသည်။
ပုရောဖက်ဒံယေလအမြဲရှိနေသော်လည်း ရှင်ဘုရင်အနေဖြင့် ဂရုမစိုက် လျစ်လျူရှုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ ဘုရားရှင်မပါရှိ၍ ဘုရားရှင် ၏သန့်ရှင်းခြင်းကိုလက်လွတ်လိုက်ရသောအခါမျိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လှမ်း နေသောလမ်းမှ ရှုပ်ထွေးခြင်းများ၊ ပြဿနာများ၊ မိုးမှောင်ကျမှုများနှင့်သာ တွေ့ကြုံရပြီး နောက်ဆုံးမှာ သေဆုံးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
နေဗုခဒ်နေဇာမင်း၏အကြောင်းကို ပြန်လည်ပြောကြားပြီးနောက် ဒံယေလသည် “အရှင်သားတော်ဗေလရှာဇာ၊ ကိုယ်တော်သည် ထိုအမှုအရာ အလုံးစုံတို့ကိုသိသော်လည်း စိတ်နှလုံးကိုမနှိမ့်ချဘဲ” (ဒံ ၅း၂၂)။ ဗေလရှာဇာ မင်း၏အမှားမျိုး ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်မိစေရန် မည်သို့သတိကြီးစွာထားရမည်နည်း။ ကပ်တိုင်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားရှင်၏ရှေ့တော်၌ နှိမ့်ချခြင်းအမြဲရှိရန် သတိပေးနေပါသလား။
တနင်္လာ နိုဝင်ဘာ ၂၅
ဧဇရမှတ်စာ (၂) နှင့် နေဟမိမှတ်စာ (၇) ကိုဖတ်ပါ။ သင်မည်သို့ သတိပြုမိသနည်း။
ဧဇရ (၂) သည် ဗာဗုလုန်၏ဖမ်းဆီးခြင်းခံသွားရပြီး၊ ပြည်တော်ပြန် သူများစာရင်း၌ ဇေရုဗဗေလနှင့်ယောရှုတို့နောက်လိုက်ပါလာသူများကို စာရင်း ပြုစုရေးသားထားသည်။ နေဟမိအခန်းကြီး (၇) ၌ တမင်ရည်ရွယ်ပြီးပြန်၍ ရေးသားပြန်သည်။ ပျင်းရိဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးအမည်နာမည်စာရင်းကြီးဖြစ် သော်လည်း အရေးကြီးသောအချက်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အရေး မလုပ်သော၊ ဂရုမစိုက်သောအကြောင်းအရာများကို ဘုရားသခင်ဂရုပြုတော် မူသည်။ ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကြီးလည်းပြီးစီးသွားပြီ။ သမ္မာကျမ်းမှတ်တမ်းပြုလို သည့်အရာမှာလည်း ပြည်တော်ပြန်ပထမအသုတ်လူဦးရေစာရင်းဖြစ်သည်။
ဧဇရနှင့်နေဟမိ၏မျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်မှအောင်မြင်ခြင်းကိုပေး သည့်တိုင် သူတို့သည် ပထမစတင်ခဲ့သောအလုပ်ကို လက်စသတ်နိုင်ခဲ့ကြ သည်။ တာဝန်ဝတ္တရားများရှုပ်ထွေးနေသည့်ကြားမှ အတားအဆီးအကာအရံ တွေကြောင့် အချိန်မီအလုပ်မပြီးခဲ့သော်လည်း ယခုတွင်ပြီးစီးသွားပြီ။
ဧဇရနှင့်နေဟမိတို့၏ဦးဆောင်မှုသည် ကောင်းမွန်လှသည်။ သို့သော် လူများတို့လည်း အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရသည်။ အဖွဲ့တိုင်း၌ မိမိတို့ကျရာတာဝန် တစ်မျိုးစီကို အချိန်ခွဲပြီးလုပ်ကြရသည်။ သို့သော် ရလဒ်အတွက် အားလုံး ကျေနပ်မှုရှိကြသည်။
အစပြုခြင်း (ဧဇရ ၂) နှင့်အဆုံးသတ်ခြင်း (နေဟမိ ၇) သည် ဆက်စပ်နေသည်။ ဗိမာန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအလုပ်တစ်ခုတည်း သာမကပါ။ ယေရုရှလင်မြို့ကိုလည်း ပြန်လည်ပြီးပုံစံစနစ်တကျတည်ထောင် နိုင်ခဲ့သည်။
နေဟမိ ၇း၇၃ ကိုဖတ်ပါ။ ဘုရားရှင်၏အလိုတော်ကိုပြီးမြောက် အောင်မြင်သည့်အထိ လုပ်ဆောင်လိုသောသူတို့၏ဆန္ဒသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို မည်သို့သင်ကြားပေးသနည်း။
]]ဣသရေလ၏သား၊ မြေးများသည် သူတို့၏မြို့များအတွင်းနေထိုင်ကြပြီ။ ပြန်လာချိန်မှ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် အံ့ဩဖွယ် အကြောင်းများစွာရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောအချိန်၌ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာကိုယ်ပိုင်ဒေသ ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ နောက်တွင် မြို့တော်ကြီးဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဗိမာန်တော်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ ပိုင်ဆိုင်သောလယ်ယာမြေဟူသမျှ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ယခုတွင် ထိုနေရာ၊ ဒေသ၊ ထိုမြို့၊ ရွာသို့ပြန်လာပြီး ပြုပြင်တည်ဆောက်ရသည်။ အလုံးစုံကိုပြုပြင်ရသည်။ ဗိမာန်တော်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သူတို့အတွက်သာမက ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများ အတွက်ပါ အံ့ဖွယ်အမှုကြီးဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးမှာ ဘုရားရှင်၏အလိုတော် နှင့်ကတိတော်အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယခု၊ သင့်အသက်တာအခြေအ.နေတွင် မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးနေ ပါသလား။ သို့သော် သင်ဆက်လက်ကျော်လွှားသွားရန် ဘုရားရှင်ကို ကိုးစား
See also ZSS 6: Kiphatsakna Pan Kisiatna Ah
အင်္ဂါ နိုဝင်ဘာ ၂၆
လွန်ခဲ့သောရက်မှ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာရသောအကြောင်းမှာ ပုရောဖက် ကြိုတင်ဟောထားချက်အတိုင်း ဂျူးလူမျိုးများ ဗာဗုလုန်မှမိမိတို့နေရပ်တိုင်းပြည် သို့ ပြန်လာနိုင်ကြသည်။ အံ့ဖွယ်အမှုကြီးပါ။ စောဒကတက်ရန်မေးခွန်းလည်း မရှိပါ။
သို့သော် လူတိုင်း၌ပြဿနာဟူသည် ရှိစမြဲဖြစ်သည်။ ပြဿနာရှိ သည့်အထဲမှ အကြီးဆုံးပြဿနာသည် ဖမ်းသွားချုပ်ထားခြင်းကိုခံရပြီးနောက် ပြန်လည်နုတ်ဆောင်ပေးမည့် အံ့ဖွယ်ကတိတော်ကိုလျစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် ဂျူးလူမျိုးအများစုသည် ဘိုးဘေးတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောပြည်သို့ ပြန်မလာလိုကြတော့ချေ။ ဗာဗုလုန်နိုင်ငံ၌သာနေရစ်လိုကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ရပါသနည်း။ ဧဇရ ၈း၁-၁၅ ကိုဖတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် အခန်းငယ် (၁၅) ကို အထူးအာရုံစိုက်ဖတ်ပါ။ ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုတစ်ခုမည်သို့ရှိသနည်း။ မိမိတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်လိုသူများအတွက် မည်သို့ သက်ရောက်မှုဖြစ်စေသနည်း။ ————————————————————————————————————————————–
အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုမှာ ဗာဗုလုန်၌ရှိသောဂျူးလူမျိုးများနှင့် အချို့ သောလေဝိသားတို့သည် မိမိတို့တိုင်းပြည်သို့မပြန်လိုကြပါ။ ပြဿနာအမျိုးမျိုး ပါဝင်ပါလိမ့်မည်။ များစွာသောလူတို့သည် ထိုနိုင်ငံတွင်မွေး၊ ထိုနိုင်ငံတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသည်။ သူတို့ခံယူချက်မှာ ထိုမျှပင်ဖြစ်သည်။ များစွာသော လူတို့သည်လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်သို့ပြန်ရမည့်လမ်းခရီးရှည်ကြီးနှင့် အန္တရာယ် အလွန်များသောအလုပ်၊ မရေရာသောဘ၀ကို ပြန်၍အစပြုရမည်ကို ရင်လေးနေ ကြသည်။ ဘယ်လိုပင်ဖြစ်စေ၊ သူတို့သည်ပြန်လာကြသည်။ ပြန်လာသော အခါ ဗိမာန်တော်၌အမှုတော်ဆောင်ရန် လေဝိအမျိုးသားများအလုံအလောက် ပြန်၍ခေါ်လာကြသည်။ (ကြာသပတေးနေ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ပါ။) မည်သည့် စိန်ခေါ်ချက်မျိုးပင်ရှိပါစေ အရောက်ပြန်လာခဲ့ကြသည်။
“ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရသောပြည်၌ နေရစ်ခဲ့သောဂျူးလူမျိုးများသည် ဆွေးစဉ်မျိုးဆက်၊ ရာစုနှစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ဝက်တိုင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ “နိပူ” (Nippur) ဒေသကိုပြန်လည်တူးဖော်လေ့လာသောအခါ၊ အာတေဇေရဇ်မင်း အုပ်ချုပ်စဉ်အချိန်အတွင်း မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသတစ်ခွင်၌ ဂျူးသူဌေး များစွာနေထိုင်ခဲ့သည့် အထောက်အထားများစွာရှိကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးဖြင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများစွာပြိုင်ဆိုင်ခဲ့သောဂျူးများကို ယုဒပြည်ကို ပြန်ပြီးပြိုပျက်နေသည့်အရာများကိုပြုပြင်ကြစို့ဟု စည်းရုံးရသော ဧဇရနှင့် ခေါင်းဆောင်များအတွက် အလွန်ပင်ခက်ခဲသောအလုပ်တာဝန်ဖြစ်နေ၏။ သူတစ်ပါး၏အုပ်ချုပ်ခြင်းကိုသာခံခဲ့ရသောထိုသူတို့သည် ပြိုပျက်နေသော ညနေရာဟောင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်မှာ အလွန်မှပင်ဝန်လေးပင်ပန်းကြမည် ဖြစ်သည်။ ဗာဗုလုန်၌နေထိုင်ခြင်းထက် မိမိကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်၌နေထိုင်ရန် ဆန္ဒရှိသူအလွန်နည်းပါးကြသည်။ ထိုသို့စိတ်ထားများရှိနေသည့်ကြားမှ ဧဇရ သည် မိသားစု ၂၀၀၀ ကို အေးအတူပူအမျှစိတ်ထားမျိုးဖြင့် မိမိတို့၏ပြည်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်စည်းရုံးခေါ်ဆောင်သောအခါ၌ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။” The SDA Bible Commentary, Vol. 3, p. 376.
“ငါတို့သည် များပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရကြမည်” (တမန် ၁၄း၂၂)။ ဘုရားရှင်၏အမှုတော်ကို သစ္စာ ရှိစွာဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိနေလျှင် စုံစမ်းခြင်းနှင့်ခက်ခဲမှုအပေါင်း ပြင်းစွာရင်ဆိုင် ရမည့်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်ကဲ့သို့ပြောထားသနည်း။
ဗုဒ္ဓဟူး နိုဝင်ဘာ ၂၇
တရားဟော ၃ဝး၁-၆ ကိုဖတ်ပါ။ ဟေဗြဲလူမျိုးများကို မည်သည့် ကတိတော်ပေးထားသနည်း။ ထိုကတိတော်ပင် အခြားသူများအတွက် မည်သို့ ရရှိနိုင်မည်နည်း။ ဧဇရနှင့်နေဟမိကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလူများ ထိုကတိကိုခံစားခွင့် ရှိရမည်လား။
ဧဇရနှင့်နေဟမိသည် ပုရောဖက်ပြုထားသောစကားများကိုသိထား သည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏လူမျိုးကို သုံ့ပန်းဘ၀မှကယ်ထုတ်တော်မူမည် ကို သူတို့သိရှိထားသည်။ နေဟမိအခန်းကြီး (၉) တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် မှာ သူတို့သည် မိမိတို့၏ရာဇဝင်ကို နားလည်ထားကြပြီး၊ အဘယ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေရသည်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းကြီးသိရှိထားသည်။ တစ်ချိန် တည်းမှာပင် ထာ၀ရဘုရားရှင်၏ကရုဏာတော်နှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းကို ကောင်းစွာ သိထားလျက်၊ မိမိတို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက် ထားသည်။
သို့ဖြင့် ထာ၀ရဘုရား၌ကိုးစားလျက်၊ သုံ့ပန်းဘ၀မှအောင်မြင်စွာ ပြန်လည်ထွက်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုကတိတော်များကြောင့် ဒုက္ခနှင့်စိန်ခေါ်မှု များစွာကြုံရသည့်တိုင် ယခုကွာတာလေ့လာရသည့်သင်ခန်းစွာများ၌ ဆင်းရဲ ဒုက္ခများစွာ သူတို့ရင်ဆိုင်ရသော်လည်း၊ ဘုရားရှင်၏ကတိတော်၌ အသက်ရှင် ကျော်ဖြတ်သွားကြသည်။
ဧဇရ ၈း၁၆-၂၃ ကိုဖတ်ပါ။ မည်သည့်စိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုရင်ဆိုင်ရ သနည်း။ ထိုစိန်ခေါ်မှုအပေါင်းကို မည်သို့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသနည်း။
ကတိတော်ရှိနေသော်လည်း ဧဇရသည် စိန်ခေါ်မှုများစွာဖြင့် ခရီး လမ်းတစ်လျှောက်အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမားကြောင်းကို သိရှိထားသည်။ သို့ဖြင့် အစာရှောင်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ နှိမ့်ချခြင်းသည်သာလျှင် မိမိတို့ ၏လမ်းခရီးအောင်မြင်ချောမောစေရန် တစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်သည်ကို အသိ စိတ်ဖြင့်နားလည်ထားကြသည်။ ရှေ့တွင်အန္တရာယ်များစွာဆီးကြိုထားနေကြောင်း သိ၍ ရှင်ဘုရင်၏ကာကွယ်ပေးခြင်းအကူအညီကိုရရှိရန် ဧဇရ၏အတွေးထဲ ဝင်လာခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်လမ်းကိုရွေးချယ် ခြင်းမပြုတော့ပါ။ နေဟမိနှင့်ယှဉ်ကြည့်သော် (နေဟမိ ၂း၉) နေဟမိသည် အစောင့်အရှောက်များကိုရရှိခဲ့သည်။ ဧဇရသည် မိမိအနေဖြင့် လုံခြုံရေးကို တောင်းလျှင် ဘုရားသခင်ကိုရှုတ်ချရာကျသည်ဟုခံယူ၏။ အကြောင်းမှာ ရှင်ဘုရင်ကို စကားအကုန် ပြောထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် “ကျွန်တော်တို့ ဘုရား သခင် ကိုရှာသော သူအပေါင်းတို့သည် တန်ခိုးကျေးဇူးတော်ကိုရလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်ကိုစွန့်သောသူအပေါင်းတို့ကို တန်ခိုးတော်ဆီးတား၍၊ အမျက် တော်သက်ရောက်လိမ့်မည်” (ဧဇရ ၈း၂၂)။ ထိုအတွက်ကြောင့် သူတို့အတွက် အလုံးစုံအောင်မြင်ခြင်းရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း၌ သူ၏ရေးသားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ (ဧဇရ ၈း၃၁) တွင် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို ကာကွယ်ခဲ့ကြောင်း၊ ခရီးဆုံးသည်အထိ လုံခြုံမှုရရှိခဲ့ကြောင်းရေးသား ထားသည်။
See also Lesson 2: KIPUMKHAT LOHNA A PIANGSAK THEI NATE
အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်း၌ ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားယုံကြည် ရန်လို၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုမရှိ၍၊ အကူအညီတောင်း ခဲ့ဖူး သော အချိန်ရှိပါသလား။ အချို့ကိစ္စများ၌ အကူအညီတောင်းခံရန်သင့် ပါသလား။
ကြာသပတေး နိုဝင်ဘာ ၂၈
နေဟမိ ၁၁း၁-၂ ကိုဖတ်ပါ။ မည်သည့်အရာများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ် ကြောင်း ရေးသားထားသနည်း။ ပတ်ဝန်းကျင်မြို့ကြီးများတွင်မနေထိုင်ရန်နှင့် ယေရုရှလင်မြို့တွင်သာနေထိုင်ရန် အဘယ်အတွက်ကြောင့် စာရေးတံ (မဲနှိုက်) ကြရသနည်း။
နေဟမိ (၁၁) ကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သို့သင်ကြားပေးထားသနည်း။ ဖမ်းသွား ခြင်းခံရသောသူများမှ အသစ်ပြန်ရောက်လာသူများအတွက် ယေရုရှလင်မြို့ တွင်နေထိုင်ရန် နေအိမ်လိုအပ်နေပါသည်။
မြို့ကြီးအတွင်းနေထိုင်သည်ထက် မြို့ပြင်တောရွာ၌နေထိုင်ခြင်းသည် သာ၍လွယ်ကူပါသည်။ မြေနေရာကိုယ်ပိုင်ရှိကြ၏။ ရှေးမိစဉ်ဖဆက်မှရရှိ ထားသောအမွေလည်းရှိ၏။ ထိုပိုင်ဆိုင်ထားသမျှကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ယေရုရှလင် မြို့အတွင်းသွားရောက်နေထိုင်ရန်မှာ စွန့်စားမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ စိတ်ထဲ၌ အခြေအနေ၊ အနေအထိုင်ပျက်စီးသွားမည်ဟု ခံစားကြရသည်။ ဘ၀သစ်ကိုပြန်စရမည်ဟုခံစားရသည်။ မြို့ပြနေထိုင်ပုံနှင့်တောရွာဓလေ့နေထိုင် ပုံသည်လည်း အကွာကြီးကွာခြားလှသည်။ မသိမကျွမ်းသောမြေနေရာဒေသ သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းသည် ခက်ခဲမှုနှင့်အမြဲတွေ့ရတတ်သည်။
ဧဝံဂေလိတရားပျံ့နှံ့ရန်အတွက် မြို့ကြီးပြကြီးအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ အမှုတော်ဆောင်ရန် စိန်ခေါ်မှုများမည်သို့ရှိသနည်း။ မြို့ကြီးများအတွင်း အမှု တော်ဆောင်ရန်မှာ အခက်အခဲနှင့်စွန့်စားမှုကို ရင်ဆိုင်လိုသောစိတ်ရှိမှသာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။
“ကျွန်ုပ်တို့အမှုတော်ဆောင်များသည် ရောက်သင့်သည့်နေရာများသို့ မရောက်နိုင်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဦးဆောင်ဦးရွက်လုပ်နေသူများသည် အမှုတော် အောင်မြင်လိုသည့်စိတ်များ မနိုးထမလှုပ်ရှားသေးပါ။ မြို့ကြီးအတွင်းနေထိုင် သူများကို ကယ်တင်ရှင်ပြန်လည်ကြွလာတော့မည့်အကြောင်းပြောရန်တာဝန် ကို ကျွန်ုပ်တို့စိုးစဉ်းမျှသာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ စိတ်ရောကိုယ်ပါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးဖြင့် မြို့ကြီးများသို့ ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်နေကြသည့် လှုပ်ရှားတက်ကြွခြင်းမျိုးကို ကျွန်ုပ်မြင်ချင် လှသည်။ ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုလည်း ခရစ်တော်ရှင်၏မေတ္တာတော် ကို သိစေလိုပါသည်။ Ellen G White, 7T, p. 40.
နေဟမိ ၁၂း၁-၂၆ ၌ အဘယ်ကြောင့်ရှည်လျားသောယဇ်ပုရောဟိတ် နှင့် လေဝိတို့၏အမည်စာရင်းများကို ဖော်ပြသနည်း။ ၎င်းအခန်းကြီးမှာပင် ဒုတိယပိုင်းဆက်လက်ဖော်ပြချက်၌ ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကို ဆက်ကပ်ခြင်းပြုသည့် အကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနေပါသလား။ (နေဟမိ ၁၂း၂၇-၄၇)။
ဘုရားသခင်သည် ကိစ္စမှန်သမျှကို မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီးမြောက်ရန် အလိုတော်ရှိသည်။ ကြီးကျယ်သောလုပ်ငန်းများ မအောင်မြင်မီ လူတို့သည် ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းသဘောကို အလျင်ဦးဆုံးထား ရှိရပါမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မိသားစုအနွယ်များသည် နေဟမိကိုကူညီမှုပြုရာ ၌ မြို့ရိုးတည်ဆောက်စဉ် အသက်ရှင်သောထာ၀ရဘုရားကိုဝတ်ပြုနိုင်ရန်နှင့် ပြင်ပပယောဂများမဝင်ရောက်နိုင်ရန် ဗိမာန်တော်၌ဦးဆောင် ဝတ်ပြုခြင်းပြုကြသည်။ မြို့ရိုးသည် မြို့သူမြို့သားများအတွက် လုံခြုံမှုကိုပေးသည်။ သို့သော်လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်များဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်ကို မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိပါက၊ ဆုံးရှုံးဖွယ်ရာအန္တရာယ်ကြီးမှ အဆင်သင့်စောင့်ကြိုထားသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လူတိုင်းသည် မိမိကဏ္ဍနှင့်မိမိတို့တာဝန်ကိုယ်စီထမ်းရွက်နေရသည်ချည်း ပင်ဖြစ်သည်။
သောကြာ နိုဝင်ဘာ ၂၉
အယ်လင်ဂျီဝှိုက်ရေးသားသည့် “Steps to Christ” စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၅၇-၆၅မှ “The Test of Discipleship” အကြောင်းကိုဖတ်ပါ။
“လူတို့သည် မေတ္တာတော်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာလိုကြသည်။ မိမိတို့၌ရှိသောစာရိတ္တသည် မပြည့်စုံကြောင်းကို သိရှိခံစားကြရသည်။ အသက်တာမှအမှားအယွင်းများကို ဆင်ခြင်မိကြသည်။ အသစ်ပြုပြင်နေထိုင်ရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ပဲ့ပြင်ခြင်းကိုပင် သံသယစိတ်ဝင်ကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေသောအခြေအနေမှာ စိတ်အားငယ်ရန်မလိုဘဲ၊ ယေရှုရှင်၏ခြေတော်ရင်းသို့တိုးဝင်ပြီး နှိမ့်ချစွာ ဆက်ကပ်ရန်သာလို၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းခြင်းနှင့်အမှားအယွင်းများကြောင့် နောင်တရရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းရန်မလိုပါ။ ရန်သူများကျွန်ုပ်တို့ ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေသောအချိန်မှာပင် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့် ၍မထားပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုမစရန် မည်သို့သောအခါမျှငြင်းပယ် ခြင်းမပြုပါ။ ခရစ်တော်ရှင်ဘုရားသည် ထာ၀ရဘုရား၏လက်ယာဘက်၌ရှိ တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ရှေ့နေလိုက်ပေးသောသူလည်းဖြစ်၏။ သင်၌ ရှိသမျှသော ပျက်စီးခဲ့သမျှကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနေသည်။ သင့်အသက်တာ အတွင်း ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအပြုအမူများကို ကိုယ်တော် မြင်ချင်လှသည်။ သန့်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းကို ကိုယ်တော်အတွက်ထင်ရှားစေပါ။
သင်သာလျှင်မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ခြင်းပြုလျှင်၊ သင့်အတွက်ကောင်းမွန်သော အကြောင်းများကို စီစဉ်မစပေးပြီး၊ ခရစ်တော်ကြွလာသည်အထိ သင်၏နေ့ ရက်များသည် လင်းလက်နေလိမ့်မည်။ စိတ်နှလုံးအပြည့်အဝဖြင့် ဆက်ကပ် ဆုတောင်းပါ။ ကိုယ်တော်ရှင်အား လုံးလုံးလျားလျားယုံကြည်ကိုးစားပါ။ မိမိ တို့ခွန်အားအပေါ်အားပြုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တော်ရှင်၏တန်ခိုးတော်ကို ယုံကြည်အားကိုးပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးစားရာအရှင်ဖြစ်ကြောင်း အသက်တာ၌ပေါ်လွင်ထင်ရှားလိမ့်မည်။” Ellen G White, Steps to Christ, p. 64.
Prev post Zeisu Lungsim Taktak
Next post MSS 9: Khrisian Laibu ahilo khat tawh Gupkhiat